किन दुख्छ ढाड र कम्मर ? धरानका चिकित्सकको यस्तो सुझाव::Hamro Koshi Awaj / awaz
किन दुख्छ ढाड र कम्मर ? धरानका चिकित्सकको यस्तो सुझाव
‘विजयपुरमा बिनाअप्रेसन ढाडको समस्याको निदान गर्दैछौं’
हिजोआज लामो समय एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने बानीका कारण ढाड दुख्ने समस्या सामान्य भएको छ । भागदौडको जीवन, लामो समयसम्म कम्प्युटरमा बसेर काम गर्ने, गलत तरिकाले एकै ठाउँमा बस्ने तथा व्यायाम नगर्ने बानीका कारण पनि अहिले सबैमा ढाड, कम्मर दुख्ने समस्या बढ्दो रहेको धरानस्थित विजयपुर हस्पिटलका वरिष्ठ हाडजोर्नी, नशा तथा बाथ रोग विशेषज्ञ डा. जनक दास बताउँछन् । अहिले युवापुस्तामा पनि ढाड दुख्ने समस्या बढेर गएको उनी बताउँछन् । ‘त्यसो त ढाड दुख्ने समस्या कष्टकर हुनुका साथै असहज पनि हुन्छ । यद्यपि यो समस्या गम्भीर भने हुँदैन ।’, उनी भन्छन्, ‘दिनभरिको भागदौड तथा धेरै पटक उठबस गर्नाले पनि वयस्कलाई धेरै ढाड दुख्ने गर्दछ । त्यस्तै एकै ठाउँमा बसेर लामो समयसम्म कम्प्युटरको प्रयोग, कम्प्युटरमा बस्दा सही तरिकाले नबस्नु, पटक पटक दायाँ बाँया घुम्ने, निहुरिने, सामान उठाउने, राख्ने, लामो समयसम्म उभिरहने गर्नाले पनि ढाड दुख्ने समस्या तीव्र हुने गर्छ ।’
उनका अनुसार यी कारणले पनि ढाड दुख्छ
–मानसिक तनाव, डिप्रेसन वा बेचैनी, गर्भावस्था, लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बसेर गर्ने काम, धूमपान, मदिरापान, समयमा नसुत्नु, मोटोपना, अत्याधिक शारीरिक श्रम आदि ।
उनले हड्डी खिइने समस्याले पनि ढाड दुख्ने बताए । ‘हड्डी खिइएपछि पनि नशा च्यापिन्छ जसले गर्दा ढाड दुख्छ ।’ उनले भने । उनका अनुसार नशा च्यापिएको छ भने पनि ढाड दुख्ने समस्या हुन्छ । उनले ढाड दुखेकै कारण प्यारालाइसिस हुने भन्ने गलत धारणा रहेको पाइएको बताए । ‘ढाड दुखेकै कारण, नशा च्यापिएकै कारण प्यारालाइसिस हुने सम्भावना एक प्रतिशत पनि हुँदैन, प्यारालाइसिस भनेको अन्य कारणले नै हुन्छ ।’
धेरैजसो ढाडको दुखाई छोटो हुन्छ र घरेलु उपचार र दुखाई कम गर्ने औषधीबाट निको हुन्छ । तर निम्न अवस्थामा भने चिकित्सकीय सल्लाह लिनु जरुरी हुन्छः
–दैनिक जीवनका क्रियाकलाप नै गर्न नसकिने गरी ढाड दुखेमा। ज्वरांश र सामान्य विसंचो सँगै ढाड दुखेमा ।
–ढाडको दुखाई कडा भएमा, केही समय पछि निको नभएमा वा आराम गर्दा वा उत्तानो पर्दा पनि दुखेमा ।
–खुट्टामा झमझम वा कमजोरी भएमा वा उभिँदा वा हिँड्दा गाह्रो भएमा ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा समेत काम गरिसकेका डा. दासले बिना अप्रेसनपनि ढाड दुख्ने समस्याको उपचारबारे शिक्षा लिएका छन् । हाल विजयपुर हस्पिटल धरानमा कार्यरत् उनी केही समयमै सो हस्पिटलमा बिनाअप्रेसन पनि ढाड, कम्मरको उपचार गर्ने प्रविधि भित्र्याउन लागेको बताउँछन् । सुनौं उनीसँग गरिएको छोटो कुराकानीः